Izindaba - Kungani Kangyuan's Laryngeal Mask Airway?
I-Laryngeal mask airway (LMA) ingumkhiqizo osebenzayo owenziwe maphakathi nawo-1980 futhi wasetshenziswa ku-anesthesia ejwayelekile ukusungula i-airway ephephile. I-laryngeal mask airway enekhwalithi enhle inezinzuzo eziningi, njengokulula ukuyisebenzisa, izinga lokuphumelela eliphakeme lokubekwa, umoya omncane onokwethenjelwa, ukuvuselela okuncane, ukugwema ukulimala komphimbo kanye ne-tracheal mucosa. Kepha ungahlukanisa kanjani ikhwalithi ye-LMA? Namuhla, thatha indawo yokuhamba imaski yekhalenda kaKangyuan ngesabelo semakethe esiphakeme njengesibonelo sokuchaza ukuthi ungahlulela kanjani ikhwalithi yendlela yokuvala imaskhi yelaryngeal kulezi zinto ezintathu ezingezansi.
Okokuqala: Okokusebenza kweLaryngeal Mask Airway
Ishubhu likhishwe nge-silicone eqinile ehlanzekile eyenziwe nge-platinum, ingeyebanga lezokwelapha elinokubonakala okuphezulu, ukuhlangana kahle kakhulu nokuqina okuqinile. Ubuso bushelelezi futhi ngeke buphuzi ngaphambi kosuku lokuphelelwa yisikhathi. Ukugoba kweshubhu kuvumelana nokwakheka komzimba womuntu.
Isigaxa senziwa ngomshini wokubumba umjovo nepompo yokuxuba enamandla yento emsulwa engamanzi abicah eyenziwe nge-platinum, inokuqina okuqinile, indawo ethambile nebushelelezi, ukuxhumana okunethezeka neziguli.
Okwesibili: Izinqubo Zokukhiqiza
Isifihla-buso se-laryngeal seKangyuan sakhiwa ngokuzimela yiqembu leKangyuan ngo-2005 futhi safakwa ekukhiqizeni ngemuva kokuhlolwa okuqinile. Inamalungelo obunikazi amaningi futhi inezinzuzo ezingenakuqhathaniswa uma iqhathaniswa nenye imaski yelilaryngeal. Inqubo eyisisekelo imi kanje:
1) Abicah impahla eluhlaza ukuxubana: ngokunemba okuvulekile imishini yokuxuba impahla ukuze kuqinisekiswe ukuxubana, futhi usebenzise imvamisa yokuguqula amanzi chiller ukulawula ukushisa kokushisa.
2) Ukukhishwa kweshubhu: imishini egcwele yokucacisa okuzenzakalelayo ene-laser ubukhulu nesilinganiso sokuzenzakalela samukelwa ukuqinisekisa ubukhulu obunembile nokulawulwa kwe-Kangyuan laryngeal mask airway.
3) Umjovo we-Cuff injection: kusetshenziswa umshini wokubumba umjovo we-liquid othomathikhi ohamba phambili othomathikhi, ipompo yokuxuba izinto ezinamandla, isenzo semishini yokulawula i-microcomputer nemingcele.
I-4) Ukuhlanganiswa kwe-Cuff: kusetshenziswa imishini ephelele yokuhambisa okuzenzakalelayo ukuqinisekisa ukuthi i-glue isetshenziswa ngokulinganayo.
5) Ukuphrinta kwe-Tube: Kusetshenziswa uyinki owomisa wezokwelapha, ukuphrinta akunabuthi futhi akuwi.
I-6) Xhuma ishubhu kanye nekhafishi bese usula i-glue: yenza ukuxhumana phakathi kwephubhu kanye nekhafula kube bushelelezi futhi kube ngokweqile, ngaphandle kokungena.
7) Hlanganisa isikhwama esibonisa.
8) Ukuhlolwa kokubukeka: i-LMA izohlolwa ngesandla.
I-9) Ukutholwa kokuvuza kwekhafula: faka i-capsule izikhathi eziyi-1.3 zokuhlolwa kwamanzi ukuthola ukuthi iyavuza yini.
10) Hlanza futhi womile.
12) inzalo ye-Ethylene oxide.
Okwesithathu: Izinhlobo zemaski yelaryngeal yomoya
Inqubo yokunemba kwesifihlavu se-laryngeal seKangyuan inquma ubuchwepheshe bayo. Ngemuva kweminyaka engu-15 yokubhapathizwa emakethe nemvula, uKangyuan unedumela elihle ezimakethe zaseYurophu, eMelika naseNingizimu-mpumalanga Asia. Ngaphezu kwalokho, i-Kangyuan ithuthukise imikhiqizo eminingana yemaski yemilumbo enemiphumela ehlukene yezinhlobo ezahlukahlukene zeziguli, njengenye indlela ejwayelekile yokuvala imaskhi laryngeal, enye indlela eqinise imaskhi yomoya (ithubhu lokungenisa umoya lingazungeza ezinhlangothini eziningi ngaphandle kokuchoboza noma ukinking) , imaskhi yomoya enamabhara e-laryngeal enezinsimbi ze-epiglottis (ukuvimbela noma yiluphi uhlobo lwe-reflux), izindlela ezimbili eziqinisiwe zemaski yomoya, i-PVC laryngeal mask airway, njll.